07-06-2012 06:23 AM #1001
Nov 28- Dec 27 တစ်လ (သို့) Nov 28 ကနေ နှစ်ပတ်စာကိုစလုံးမှာ နေဖို့ လူ ၁၁ ယောက်စာ အိမ်ရှာနေပါတယ်။
ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ မသိ ဖြစ်နေပါတယ်။
အတွေ့အကြုံ ရှိသူများ မျှပေးပါဦး...။
အိမ်ခန်းငှားတဲ့သူတွေ ဒီဇင်ဘာ တစ်လလုံးငှားမယ်ဆိုလဲ အကောင်းသား...
အဲ့အချိန်မှ ရှာလဲ ဖြစ်တာပေါ့..။ ဒါပေမယ့် စိတ်ချချင်လို့ နည်းနည်းစောစောလေး လုပ်လိုက်ချင်လို့...။
07-06-2012 07:18 AM #1002
ကျနော့် သူငယ်ချင်းတယောက်က..ကီလို ၀ယ်ချင်လို့ပါခင်ဗျာ.
ဘယ်လို ၀ယ်ရမလဲ..ဆိုတာ..တချက်လောက် မေးချင်တာပါ...
ပစ်စည်းတွေကတော့... စာအုပ်နဲ့ မိန်းကလေး.. အ၀တ်အစားတွေပါ...
သိချင်တာကတော့.တကိလို ဘယ်ဈေးပေါက်တယ်ဆိုတာပါပဲ...( ခန့်မှန်းခြေ ကီလို ၂၀ လောက် ၀ယ်ချင်တာပါ..)
အချိန်ကတော့..ဒီ ဂျူလိုင်လ အတွင်း..ဘယ်အချိန်မဆို..အိုခေပါတယ်...
ရောင်းချင်တဲ့သူများရှိရင်.. ပီအမ် နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ..
KaungKinPyar, Lynn Eainthu, mrlynn, pinkladylay
07-06-2012 07:46 AM #1003
ကိုသူရရေ shweroom က http://www.shwerooms.com/otherads.php အဲလင့်မှာလည်းကြော်ငြာတတ်ပါတယ်။ အဲမှာကတော့ ဈေးနည်းနည်းသက်သာတယ် တကီလို အမြင့်ဆုံး ၆ကျပ်လောက်ပေါ့ ဒါမဟုတ် City hall ကမြန်မာဆိုင်တွေမှာလည်းရပါတယ် မြနန်းနွယ်တို့ ရဲ့ရင့်တို့ စသည်ဖြင့်ပေါ့ သူတို့ ကတော့ ဈေးနည်းနည်းပိုပါတယ် ပစ္စည်းအမျိုးအစားပေါ်မူတည်ပြီးဈေးကွာပါတယ်။
KaungKinPyar, Lynn Eainthu, mrlynn, Thura Soe
07-06-2012 08:09 AM #1004
Originally Posted by myananda
cknae&oGm;wm b,f&uftwGufrsm; &oGm;wmvJ? wdkYawGvnf; Mo*kwfvv,favmuftwGuf appointment ,lcsifvdkY 0if0ifMunfYaewm 2ywfavmuf&SdjyD/ reufjzefjyefvmygeJYyJ wdk;aevdkY vSnfYjyefvmae&wm? tJ'D reufjzef jyefvmygqdkwmvnf; odyfem;rvnfbl;? 'DaeYeHeufydkif; rSmMudK;pm;MunfYwm olu reufjzefjyefvmygqdk&if wu,fMuD;udk reufjzefjzpfwJh aemufwpfaeY reufrSjyef0ifMunfY&rSmvm;? 'grSr[kwf 'DaeYrSmyJ usefwJh wjcm;tcsdefawGudk jyef0ifjyD; MudK;pm;MunfY&if&Edkifrvm;? tck christine &oGm;wJh&ufuav; od&&ifawmh udk,f,lrnfY&uf tqifajyrajyrSef;MunfYedkifr,fxifwmyJ?
aemufjyD;'DaeY0ifMunfYawmh t&if&ufawGuvdkr[kwfyJ Register vkyfcdkif;aeyga&mvm;? username,password awGeJY login vkyfcdkif;aevdkY? christine a&m tJvdkyJ register vkyfjyD;0ifwmyJvm;? christine a&m? wjcm;zwfrdwJh olawGrsm;&Sd&ifvnf; ajzay;MuygOD;? 'Davmufawmif ,l&cufaerSawmh t&ifuvdkyJ oGm;wef;pDvdkufcsifawmhwmygyJ? wef;pDwmurS wpf&ufyJ tcsdefukefw,f? online &ufcsdef; ,lumrSyJ wpfaeY wpfaeY 0if0ifMunfYae&wJh 'ku©u ydkMuD;aeovdkyJ/
ကျမလည်းတော်တော်ကြာပြီ Q ယူဖို့စောင့်နေတာ။ မနေ့ကဆို မနက် ၇ နာရီ အလုပ်မသွားခင် ထဲက စောင့်နေတာ။ မနက်က တော့ Registerလုပ်ခိုင်းတယ် ကျမလဲ မလိုအပ် ဘူးထင်လို့ မလုပ်ပါဘူး။ မလုပ်တာ မှန်သွားတယ်။ ညနေ ၄ နာရီ မှာ စပြီ Q ယူလို့ရတယ်။ ရက်ကတော့ ၁၇-၇-၂ဝ၁၂ ရတယ်။ ၄း၃ဝ မှာ ပိတ်သွားပြန်ရော။ ဘယ်အချိန် စပေးလဲမသိပါဘူးရှင်။
KaungKinPyar, Lynn Eainthu, myananda